UPhilips Momentum 278M1R, uhlalutyo olunzulu | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | ngokubanzi, Umfanekiso kunye nesandi, Reviews, ZeThelevishini
Ngokuvela kwe-teleworking, ukusasaza umhlaba kwaye ngakumbi umdlalo, abavelisi bokubeka iliso banikezela ngeendlela ezinomdla ngakumbi ezinceda abasebenzisi ukuba benze useto olulungileyo olunokusinceda ukuba sisebenzise indawo ngaphandle kokuphulukana neempawu ezifanelekileyo.
Le Philips Momentum 278M1R ibonelela ngento yonke enomdla kunye nomdlalo okhethekileyo, ubuchule kunye nemultimedia. Fumanisa kuthi uhlalutyo olunzulu lweli liliso le-Philips eguquguqukayo kunye namava ethu okusetyenziswa, siyazi ukuba awuzukufuna ukuyiphosa, ukuba ufuna esweni, unokugqibela uyithanda le nto Nye.
2 Iimpawu zobuchwephesha bePaneli
3 Unxibelelwano kunye ne-HDR
4 Isandi kunye nemultimedia amava
Le Philips Momentum 278M1R isela ngokuthe ngqo "kumzalwana wayo omkhulu" i-intshi ezingama-55 uPhilips Momentum, Endaweni yoko, ijolise ekunikezeleni ngamava omsebenzisi omangalisayo kwiinkalo ezininzi, enye yazo uyilo. Umgangatho wokwakha ulungile, utyikityo oluqhelekileyo kwiimveliso zePhilips, emva koko ukulahla uyilo lohlobo "lokudlala", into exatyiswayo nayo ukuze ikwazi ukuyibeka kwindawo enokuba sisifundo okanye isikhululo somsebenzi. Uyilo luphuculwe kwaye lubukeka, lifihla iimpawu zalo kwi-lambskin yangempela.
Ngaba uyayithanda uyilo lwayo? KwiAmazon lelona xabiso libalaseleyo ngokuhanjiswa simahla kweeyure ezingama-24.
Zombini i-bezel ephezulu kunye amacala "ancitshisiwe" malunga neemilimitha ezisibhozo, yonke into ihleli kwinxalenye esezantsi. Ukukhanya kwe-LED yamandla ngasezantsi ngasekunene kunye ne-Ambiglow yayo ejikeleze umva kwesixhobo, apho zombini unxibelelwano kunye nekholamu yenkxaso yalo. Le kholamu inenkqubo elula yofakelo "cofa", njengoko ihlala isenzeka kwezi ndawo ziphakathi / eziphezulu zeemveliso zePhilips, kwaye yinto esiyixabisayo kakhulu, ekwaziyo ukuyenza ngaphandle kwazo zonke iintlobo zezixhobo kwindibano yokuqala.
Kwinqanaba loyilo, oku UPhilips Momentum 278M1R Umele umgangatho wolwakhiwo, uyilo oluhle kwaye linomtsalane kwimizi mveliso kunye nee-LED zangasemva ezibambekayo.
Iimpawu zobuchwephesha bePaneli
Siqala kwiphaneli ye Ngama-intshi angama-27 anesisombululo se-4K UHD sama-pixels angama-3840 x 2160 ngobudlelwane imeko yendabuko ye-16: 9 kunye nokuhambelana kwe-HDR. Esi sisombululo sinika uxinzelelo lwe-pixel I-163 ye-DPI kunye nenqaku lepikseli ye-0,155 x 0,155 yeemilimitha, into ekufuneka uyigcinile engqondweni. Sithatha ingqayi yokuqala yamanzi abandayo ngekomityi yesoda kwaye Uhlaziyo lwepaneli, olubotshelelwe kwi-60 Hz.
Sinefayile ye- Inomdla kwi-350 cd / m2 ilayithi ekhanyayo, kuba njengoko kucacile, sisebenza kwipaneli ye-IPS LCD. Sine-1000: 1 umahluko kwaye oku kusivumela kunye ukuba sonwabe I-91% yoluhlu lwe-NTSC, i-105% yoluhlu lwe-sRGB, kunye ne-89% yemigangatho ye-Adobe RGB, ukuze sikuthathele ingqalelo njengokulungeleyo ukuhlela ifoto ngokusekwe kuvavanyo lwethu. Kuyinyani kumbala, kwaye sahlala kufutshane kakhulu neqondo lobushushu elifanelekileyo le-6500K ekhokelela kumfanekiso ocacileyo kunye nendalo, ngaphandle kwalapho kubomvu, apho abagadi bePhilips bathambekele ekuhluthiseni. Ngaphandle koko sinombala ofanayo ohambelana nendalo kwaye ubonakala umnandi ekusebenzeni nasekudlaleni. Ungayithenga ngexabiso elifanelekileyo kwiAmazon, ungaphoswa leli thuba.
Unxibelelwano kunye ne-HDR
Le Philips Momentum 278M1R isilela phantse nganto, ke makhe siqale ngantoni Ndiluphose ngoko nangoko uqhagamshelo lwe-USB-C. Ngelixa kuyinyani ukuba obu buchwephesha abukaphunyezwa ngokubonakalayo kwimeko yobungcali, abasebenzisi beApple bayayixabisa. Okwesibini, Siyaqhubeka noluhlu olubanzi kakhulu lwezinto ezinokwenzeka, eyona intle kwintengiso njengoko bendinako ukujonga:
I-1x 3,5mm yokukhutshwa kwehedfoni
I-2x HDMI 2.0
I-1x i-DisplayPort 1.4
I-1x i-USB-B ephezulu (yezixhobo kunye nePC)
I-4x i-USB 3.2 esezantsi yokuqhagamshela kwimida (kubandakanya i-BC 1.2 ekhawulezayo)
Uluhlu olungenakubalwa lwamazibuko luya kusivumela ukuba senze ngaphandle kwe-HUBs ukuba sisebenzisa izibuko le-USB-B, into ethi kwezinye iiliso zePhilips zenziwe ngezibuko le-USB-C. Iluncedo kwiibhodi yezitshixo, iimpuku nokunye okuninzi, into ebonakala ilungile kum.
Ngokubhekisele kwi-HDR, siqinisekisiwe nge-HDR400, sithathela ingqalelo ukuba asinakho ukukhanya okukhulu okanye ukukhanya kwe-zonal, ke i-HDR yenza konke okusemandleni. Inombala obanzi weGamut ke uluhlu lwayo lwemibala lubanzi kakhulu kwiindawo ezimnyama. Ukukhanya kusengqiqweni kwaye ngokubanzi kusinike iziphumo ezilungileyo.
Isandi kunye nemultimedia amava
Le Philips Momentum 278M1R inezithethi ezibini ezidityaniswe ngokupheleleyo amandla aqikelelweyo e-5W nganye. Inyani yile yokuba ngokungabikho kwayo konke okusisiseko, kusinika amava ngaphezulu komndilili. Nangona kunjalo, ndicebisa ibar yesandi elungileyo njengeSonos Beam njengenkampani elungileyo yolu hlobo lwesixhobo. Bayakwazi ukuzalisa amava ethu ukuba asinyanzelisi kwaye basikhuphe kakuhle. Kwithiyori, Zizithethi eziqinisekisiweyo ze-DTS.
Ngokubhekisele kumava omsebenzisi, kuya kufuneka ndibhengeze ukuba ndingumlinganiso wefektri yokujonga iimonitha zePhilips, kubonakala ngathi yendalo kwaye iyaguquguquka. Sisebenzise amathuba eempawu zayo ngePlayStation 5 kwaye ngendlela efanayo sisebenze nayo ngeApple MacBook Pro, kwaye ikwazalisekisile kokubini ukushicilelwa kweefoto kunye nomdlalo wevidiyo. Sineendlela Imifanekiso ekrelekrele ngokuseta kwangaphambili kokusebenza ngakunye, kunye neetekhnoloji zesitayile seFlickerFree. Ngokucacileyo yabo kuphela yi-4 ms imputlag (GtG) basivumela ukuba sonwabele abatoli kunye neminye imidlalo yevidiyo. Ewe ngokunjalo, i-60 Hz mhlawumbi basilela kubona badlali bafuna kakhulu.
Amava ezi-22 ze-RGB ze-LED ngasemva kwesakhelo esibhaptizwa yiPhilips njenge-Ambiglow iyamangalisa, idala ukuntywiliselwa okuphawuleka kakhulu, kwaye kutheni ungakuthethi, kuyinto nje «emnandi» eofisini / kwigumbi lethu, konke ngaphandle kwesoftware yangaphandle .
Sijongene nokubeka esweni ukuguquguquka okukhulu, ukhetho olufanelekileyo kwabo bafundayo / basebenza kwindawo enye apho bachitha khona iiyure zabo zolonwabo, kusivumela ukuba sandise indawo ngaphandle kokuphulukana nomsebenzi omnye, nesiqinisekiso sePhilips. Ixabiso, elijikeleze i-euro ezingama-400 ngokuxhomekeke kwindawo yentengiso, ngokuhanjiswa simahla kwiAmazon.
Uyile, uyilo olwakhiwe kakuhle
Ukukhetha okubanzi kwamazibuko kunye nokunxibelelana
Nge-Ambiglow ugcina umtya we-LED
Iphaneli elungileyo kakhulu enemisebenzi elungileyo kunye noseto
Ndikhumbula ukukhanya ngakumbi kolu luhlu lwamaxabiso
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » IPhilips Momentum 278M1R, uhlalutyo olunzulu
URoborock Dya, oyena mntu uphucukileyo ococekileyo ophetheyo